नयाँ केटाहरू अलि सन्की छन् : बाबुराम लामा
२०७६ भदौ २५ बुधबार ०९:२०:२५
(जो मानिस सन्तुष्ट हुन्छ ऊ सुखी हुन्छ । उसलाई सानातिना उतारचढावले फरक पार्दैन । जसले सानो उपलब्धिमा पनि सन्तुष्टि लिन सिक्छ उसलाई ठूलो चाहना पनि हुँदैन । मानिस कति उपलब्धि पाउँदा बढी सन्तुष्ट हुन्छ भन्ने कुराको सीमा पनि सम्भवतः हुँदैन होला । यस्तै थोरै पाउँदा पनि धेरै सन्तुष्ट हुनेमध्येका पर्छन् बाबुराम लामा । धादिङका २७ वर्षे बा २ क ४३२८ नम्बरको टिपरका चालक लामा आफ्नो काममा सन्तुष्ट छन् । आखिर के छ यसको पर्दा पछाडिको रहस्य ? सडक पाइलटसंगको अन्तरड्डमा साँघु प्रतिनिधिसंग लामाले आफ्नो जीवनकुण्डली खोलेका छन्–सम्पादक)
० गाडीलाइनमा आएको कति भयो ?
–१० वर्ष भयो ।
० कसरी आउनु भयो त ?
–साथीभाइको संगतले भन्नुपर्ला । ६ कक्षामा पढ्दापढ्दै छाडेर आइयो । मेरो दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो गाडीलाइनमा ।
० पढ्न छाडेर पछुतो लाग्दैन ?
–लागेन । गाडीलाइन ठीक छ भनेर पढ्न छाडेरै यो लाइनमा आएको हुँ । अहिलेसम्म काम गरिरहेकै छु । नपढेर पछुतो छैन ।
० के गरियो गाडीलाइनमा पहिले ?
–मैले सुरुका दुई वर्षसम्म ट्रकमा काम गरें । सहचालक भएर काम गरेको हुँ । त्यसपछि मैले ८ वर्ष भयो टिपर चलाउन थालेको । टिपरमात्रै चलाएँ मैले ।
० कस्तो छ काम गर्न ?
–काम गर्न सजिलो त पक्कै छैन । काम गरे पैसो छ नगरे छैन ।
० टिपरलाई अहिले कत्तिको अप्ठेरो छ ?
–टिपर त सबैको आँखाको तारो बनेको छ । राजधानीमा गाडी दिनमा छिराउन पाइँदैन । एक टिपमात्र काम हुन्छ । पहिले तीन चार टिपसम्म हुन्थ्यो । अहिले एक टिपमात्र हुँदा घाटा छ । एक हजारमात्र भत्ता पाइन्छ । दिनमा पनि राजधानीमा चलाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो । सरकारले दुःख दियो ।
० विरोध गरिएन ?
–गरिएको थियो धादिङमा । साथीहरूले पनि विरोध गरेका थिए । तर, काठमाडौंमा भने गरेनौं । यहाँ एकजुट हुँदैनन् । आपसमा मिल्न सकिँदैन । त्यसैले त प्रशासनले जे चाह्यो त्यही गर्न सक्छ ।
० सुविधा कस्तो छ नि ?
–ठीकै छ । हाम्रो त लङ्गाली ढुवानी सेवा हो । कम्पनी नै छ । सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ ।
० कमाइ कस्तो छ नि ?
–कमाई पनि ठीकै छ । बचत छैन ।
० विदेशतिर जाने सोच त छैन ?
–जाने भनेर पासपोर्ट पनि बनाएको हो । तर मिति सकिन थाल्यो होला जान सकिएन ।
० कहाँ जान खोज्नु भएको थियो ?
–कतार र टर्कीतिर जाने भनेर खोजेको हो । ट्राइ गरियो । भएन । तर राम्रो चान्स मिले फेरि जाने मन छ ।
० रमाइलो पनि गरिन्छ होला नि ?
–मोजमस्ती त भैहाल्छ नि । तर बालबच्चा पाल्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो गरिएन । प्रायः बिहे नगरेकाहरू त्यसरी हिँड्छन् ।
० कति छन् सन्तान ?
–एक छोरा र एक छोरी छन् ।
० गाडीलाइनमा आउलान् ?
–आउँदैनन् । उनीहरूको जमाना नै अहिले अर्कै छ । हाम्रो जमाना अर्कैै थियो ।
० गाडीलाइन कस्तो छ नि ?
–ठीकै छ । आफूले सिकेको सीप यही हो । अरु जानिदैन । जे छ ठीकै छ । तर तनाव पनि हुन्छ । भीडभाडमा हिँड्नु पर्छ । टिप झार्दा रातिको ११–१२ बज्छ । गाडी चलाउन थालेपछि कोठामा नपुगुन्जेल तनाव हुन्छ ।
० टिपर त अलि खतरा हुन्छ रे ?
–हैन त्यस्तो । म ढुक्कले हिँड्छु । गल्ती गरेपछि डराउने हो । तर गल्ती नगर्दा त मान्छेले हान्न आउँछन् भने गल्ती गरे के होला ।
० टिपरबाटै दुर्घटना चाहिं किन बढी हुन्छ त ?
–दुर्घटना गराउने ड्राइभरले नै हो । फेरि टिपरलाई त अपराधी नै ठान्छन् । पब्लिकले टार्गेट गरेकाले बिस्तारै चलाउन प¥यो । युवा केटाहरूले अनियन्त्रित भएर गाडी चलाएकै कारणले दुर्घटना हुने हो । पुराना पुराना ड्राइभरहरू ठीकै छन् । नयाँ केटाहरू अलि सन्की छन् । गाडी कुदाउन पाए भने नराम्रोसंग कुदाउँछन् ।
० ट्राफिक प्रहरीको ब्यवहार कस्तो लाग्छ छ नि ?
–बढी किचकिच हुन्छ । टिपरलाई जानीजानी गल्ती देखाउँछन् । पहिले त ट्राफिक प्रहरी पैसा खान्थे । अहिले कम्पनीको गाडी भएकाले हामी नै दिदैनौं । ट्राफिक प्रहरीले चिट काटे काटोस् । तर, घुस दिइँदैन ।